~ Witch83၏ စိတ်ကူးကမ္ဘာ ~: September 2013
(၆၃)ကြိမ်မြောက် Miss World 2013 ပြိုင်ပွဲကို (၂၀၁၃)ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၃)ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးစကာတင်ပြိုင်ပွဲကို စက်တင်ဘာလ (၂၈)ရက်နေ့ ... အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဘာလီကျွန်းမှာရှိတဲ့ Dua Convention Center မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အစကတော့ ဂျကာတာမြို့  မှာ ကျင်းပဖို့ စီစဉ်ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြမှု တွေကြောင့် နောက်ဆုံးတော့ .. အလှမယ်တွေကို ပြိုင်ပွဲအတွက် campသွင်းနေစဉ်ကာလအတွင်းမှာပဲ ဘာလီကျွန်းကိုရွှေ့ပြောင်း ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
Miss World 2013 သရဖူကို ရရှိသွားသူကတော့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှ အလှမယ် Megan Young ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Miss World ပြိုင်ပွဲသမိုင်းမှာ Venezuela နိုင်ငံက အောင်မြင်မှုအများဆုံးရခဲ့ပြီး သရဖူကို (၆)ခါဆောင်းဖူးပါတယ်။ India နဲ့ Britainကတော့ (၅)ကြိမ်ဆီရဖူးပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်ကတော့ ဒါ.. ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ရတာပါ။
American-Fillipino Beauty, Megan Young
Filipino Actress, Megan Young
Beach Beauty 4RU, Philippines
Miss World 2013 ပြိုင်ပွဲရဲ့ First runner-upဆုကို ပြင်သစ်အလှမယ် Marine Lorphelinက ရရှိခဲ့ပြီး Second runner-upဆုကိုတော့ Miss Gahana, Carranzar Naa Okailey Shooterက ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဆုရတဲ့အလှမယ်တွေကို အစဉ်အတိုင်း ရေးပြရမယ်ဆိုရင် အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Brazil, Ghana, Philippines, France, Spain
Australia, Nepal, England, Indonesia, Jamaica + Top-5
Ukraine, India, Netherlands, Italy, Slovakia, Dominican Republic, USA, Hong Kong, Thailand, Belgium, Aruba + Top-10
MW2013ပြိုင်ပွဲရဲ့ Continental Beauty Queen တွေကတော့
Queen of Africa: Ghana
Queen of Asia: Phillipines
Queen of Oceania: Australia
Queen of Europe: France တို့ပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။
Top-20 ကိုဝင်စေတဲ့ Special award winnerတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Top Model: Philippines ( USA:1RU, France: 2RU)
Beach Beauty: Brazil ( France:1RU, Ghana: 2RU)
တကယ်တော့ MWရဲ့ မူအရ အလှမယ်တွေက ရေကူးဝတ်စုံနဲ့ ပြိုင်ရမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ မူစလင်ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်နဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒပြမှု တွေကြောင့် MW Organization ရဲ့ဥက္ကဌ Julia Morley ဟာ MW2013 ပြိုင်ပွဲအတွက် swimsuit competition နေရာမှာ beach beauty ကို အစားထိုးဖို့ သဘောတူပေးခဲ့ရပါတယ်။ ဘာမှတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ two-piece မဟုတ်တဲ့ ရေကူးဝတ်စုံအပြည့်မှာ အောက်က ပိတ်စပတ်ပြီး ပြိုင်ကြရပါတယ်။ ဒီပြိုင်ပွဲမှာ ဘရာဇီးကအလှမယ်က ဆုရခဲ့ပါတယ်။
Beach Beauty Winner, Brazil
Beach Beauty: Top-11
Beauty withaPurpose: Nepal (1RU: Australia, 2RU:Tanzania)
အပေါ်က video clipလေးဟာ Miss Nepal ဆုရသွားတဲ့ သူမရဲ့ Beauty With A Purpose Project ပါ။ ခေါင်းစဉ်လေးက "Project Smile: Free Dental Camp"တဲ့။ သွားဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အပြုံးရဲ့အရေးပါပုံနဲ့ ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေး အရေးပါပုံကိုသိတာကတစ်ကြောင်း၊ သူမဖခင်လိုပဲ လူတွေကိုတစ်ခုခုပြန်ပေးချင်တာကတစ်ကြောင်းကြောင့် ဒီပရောဂျက်ကို လုပ်ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ fund ရှာ၊ သူမရဲ့ စီနီယာသွားဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတဲ့နောက်မှာ နီပေါနိုင်ငံရဲ့ အစွန်အကျဆုံး Jumlaမြို့ကိုသွားခဲ့ပါတယ်။ သွားတိုက်တံနဲ့ သွားတိုက်ဆေးရှိတယ်ဆိုတာတောင် မသိတဲ့ လူတွေကို ပညာပေးခဲ့တယ်။ မိခင်တွေကိုလည်း သေချာရှင်းပြခဲ့တယ်။ သွားတွေ စစ်ဆေးပေးခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။ :)
Miss Nepal watching her own Project
Sport: Netherlands ( Spain:1RU, Northern Ireland:2RU)
Multimedia: India (Thailand: 1RU, Nepal:2RU)
Talent: Indonesia (Australia:1RU, Ukraine: 2RU)
Miss Indonesia singing Opera
Talent Competition မှာတော့ အင်ဒိုနီးရှားအလှမယ်က ဆုရသွားပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်ပရိတ်သတ်တွေကတော့ Miss Austraila က ပိုရသင့်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့ MW ရဲ့ competition မှာ သီချင်းဆိုတဲ့သူတွေကြီးပဲ ဆုရကြတာလဲ ဘာညာဆိုပြီး ကွန်ပလိန်းတက်ကြပေမဲ့ ကျမအမြင်မှာတော့ Miss Indonesia ဟာ ဒီဆုနဲ့ ထို်က်တန်ပါတယ်။ အော်ပရာကို တကယ် ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆိုသွားတာဟာ မနှစ်ကဆုရတဲ့ Miss World 2012, Wenxia Yu ထက်တောင် သာပါသေးတယ်။ Miss Indonesia, Vania Larissa ဟာ သူမ အသက် (၁၄)အရွယ်တုန်းကလည်း Indonesia Got Talent ပြိုင်ပွဲမှာ ဆုရဖူးပါတယ်။ အောက်က video clip ကလေးက talent ပြိုင်ပွဲ overview လေးပါ။
အောက်က video clip ကလေးက Final Q & A session လေးပါ။
My Preferences for MW2013
ဒီပြိုင်ပွဲအတွက် ကျမအကြိုက်ဆုံး မယ်ကိုပြောပါဆိုရင် ပြင်သစ်အလှမယ် Marine Lorphelin ပါ။ ပြင်သစ်အလှမယ်အပြင် ယူကရိန်းအလှမယ်Anna Zaiachkivska နဲ့ ဘရာဇီးအလှမယ် Scancler Frantz တို့ကို ကြိုက်ပါတယ်။ Miss Indonesia ကိုလည်းကြိုက်ပါတယ်။
ပြင်သစ်အလှမယ်ကိုတော့ ကြိုက်တယ်ဆိုတာထက် အသည်းယားပြီး ချစ်မိတာပါ။ တော်တော်လေးကို ငယ်ရွယ်သွက်လက်ပြီး အရမ်းကို lively ဖြစ်ပါတယ်။ သူ.. ပြင်သစ်မှာ ရေခဲကန်ထဲဝင်ပြထားတဲ့ video clip ကိုကြည့်ရတော့ တော်တော် အသည်းယားမိပါတယ်။
ယူကရိန်းအလှမယ်ကိုလည်း ကြိုက်ပါတယ်။ ဘယ်လုိုရုပ်လေးလည်း မသိပါဘူး။ အရုပ်လေးနဲ့တူပြီး ချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ သူမကတော့ top-20မှာတင် ပြီးသွားပါတယ်။ Top Modelမှာ 3rd runner-upရခဲ့ပြီး talent competitionမှာတော့ second runner-up ပါ။
ဘရာဇီးအလှမယ်ကတော့ ဖိလစ်ပိုင်အလှမယ်လိုပဲ ပရိတ်သတ်အများဆုံးရထားတဲ့သူပါ။ သူမဟာ မျက်နှာရော၊ ကိုယ်လုံးပါ တော်တော်လေးကို လှပါတယ်။ ဘရာဇီး (သို့မဟုတ်) ဖိလစ်ပိုင်အလှမယ် ဆုရမယ်လို့ လူတွေက တစ်ကြိုပေးခဲ့ပေမဲ့ တကယ်တမ်းတော့ သူမဟာ MW ကို 3rd runner-up၊ Beach Beautyနဲ့ Queen of Americasတို့နဲ့ပဲ ကျေနပ်ခဲ့ရပါတယ်။ Top Model နဲ့ Beauty With A Purpose programme တွေမှာတော့ 4RU ပါ။ သူမဟာ crowning moment ... Julia Morleyက ဆုရတဲ့သူတွေကို ကြေငြာတဲ့အချိန်မှာ တော်တော်လေးကို စိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်။
Top Model: 4RU
MW2013ဆုရသွားတဲ့ Megan Youngကို တော့ သိပ်မကြိုက်ပါဘူး။ Megan Young ဟာ အရပ်လည်းမြင့်၊ ကိုယ်လုံးလည်းလှ၊ အရည်အချင်းလည်းရှိပါတယ်။ ဆွဲဆောင်မှုလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ .. ဘာလို့လည်း မသိပါဘူး။ သူ.. သိပ်မပြုံးပါဘူး။ ဆုရတာတောင် သိပ်ပြီး ပျော်တာမျိုး၊ တုန်လှုပ်တာမျိုးလည်း မရှိပါဘူး။ သို့သော်လည်း သူရသင့်လို့ရတယ်၊ ဒီ Miss World 2013 ပြိုင်ပွဲ ဟာလည်း Fair and Squareဖြစ်တဲ့ ပြိုင်ပွဲတစ်ခုပဲ ဖြစ်တယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။ Final Q & A မှာ သူဖြေတာကောင်းပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာ နန်းခင်ဇေယျာ MW2013 ဝင်ပြိုင်မယ်၊ ဖိတ်ခေါ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေ ထွက်ခဲ့ပေမဲ့ တကယ်တော့ သူ.. ဝင်မပြိုင်ခဲ့ပါဘူး။ Franchise လုပ်မဲ့သူ မရှိတာကြောင့် ထင်ပါတယ်။ Miss World 2014 ပြိုင်ပွဲကိုတော့ နောင်နှစ်၊ အင်္ဂလန်မှာ ကျင်းမမယ်ဆုိုတဲ့အကြောင်း သတင်းပါးရင်း ဒီပို့(စ်)လေးကို နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါတယ်။
witch83 (29/09/2013; 3:28PM; GMT+8)
5. The Ideal Beauty
6. Missosology To Continue Reading
Posted by witch83 at 3:24 PM2comments:
ဘလော့မိတ်ဆွေများအကြောင်း (Belated Post for Blog Day)
ဘလော့ဂါတွေရဲ့ ဘလော့ဒေး အမှတ်တရပို့(စ်)တွေ အများကြီးတက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့် သြဂုတ်လ (၃၁)ရက်နေ့ဟာ ရှစ်ကြိမ်မြောက် ဘလော့ဒေးဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စိတ်ထဲရှိရာ၊ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတာတွေကိုသာ စိတ်ထဲရှိရင်ရှိသလို၊ အချိန်ရရင်ရသလို စာကောက်ရေးတတ်သူမို့ အဲ့ဒီပို့(စ်)ရေးဖို့ စိတ်ကူး လုံးဝ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ စာရေးရင်း သိခဲ့ရတဲ့ ဘလော့ချစ်မိတ်ဆွေအမ "မစံပယ်ချို" က tagလာတဲ့အတွက်ကြောင့် လေးစားခင်မင်မှုနဲ့ ဒီပို့(စ်)လေးကို ရေးလိုက်ပါတယ်။
ရေးမယ်ဆိုပြီး ရေးစရာတွေကို စဉ်းစားကြည့်တော့ မြန်မာ့ဘလော့သမိုင်း၊ အွန်လိုင်းစာပေသမိုင်း၊ ဘလော့ဂါတွေရဲ့သမိုင်းတွေအကြောင်းကို သေချာမသိတာကြောင့် ကိုယ့်ဘလော့အကြောင်းပဲ ကိုယ်ရေးတော့မယ်လို့ စဉ်းစားမိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီဘလော့အကြောင်းနဲ့ ကျမအကြောင်း ကို စာပြန်စရေးဖြစ်တဲ့ မနှစ်က စက်တင်ဘာလမှာ ရေးဖူးပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ကျမရဲ့ ဘလော့မိတ်ဆွေတွေအကြောင်းကိုပဲ ဘလော့ဒေးအမှတ်တရ ရေးလိုက်ပါတယ်။
~ . ~ . ~. ~. ~
ပြောရရင်တော့ ကျမဟာမာနကြီးတာမျိုး၊ အထာကိုင်တာမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့ နည်းနည်း ဘာသိဘာသာ နေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘလော့မိတ်ဆွေ အများကြီး မရှိပါဘူး။ မိတ်ဆွေလည်း သိပ်မဖွဲ့တတ်ပါဘူး။ ကိုယ်..အားတဲ့အချိန်တွေမှာ ကိုယ့်ဆီ လင့်(ခ်)ရလို့ လာလည်ကြသူတွေဆီ အမြဲ ပြန်လည်ပြီး comment ချန်တာမျိုးပဲ ရှိတတ်ပါတယ်။ ရှိရှိသမျှ ဘလော့ဂါ တွေရဲ့ တက်လာသမျှပို့(စ်)တွေကို စောင့်ဖတ်တတ်ပေမဲ့ ဘာခြေရာမှ မချန်ဘဲ တိတ်တ်ိတ်လေး ပြန်လာတတ်တဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဘလော့ကိုလည်း သိပ်ပြီး promote မလုပ်ပါဘူး။ ကျမရဲ့ မျက်နှာစာအုပ်ပေါ်မှာတောင် ကိုယ်ရေးထားတဲ့ပို့(စ်)တွေ ပြန်မ share ပါဘူး။ ကိုယ့်ဘလော့အကြောင်းလည်း သိပ်မပြောပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ privacy လိုချင်လို့ပါ။ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတာတွေ၊ ကိုယ့်စိတ်ထဲရှိတာတွေ၊ ကိုယ့်ခံစားချက်တွေကို ကိုယ့်ရဲ့အားလပ်ချိန်မှာ စိတ်ပြေလက်ပျောက် စာရေးချင်လို့ပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ ဘလော့ပေါ်မှာ ဆဲတာ၊ဆိုတာ၊ ငြင်းခုန်ကြတာတွေကိုလည်း မမြင်ချင်လို့ပါ။ ဒါကြောင့် ကျမမှာ ဘလော့မိတ်ဆွေတွေ သိပ်မရှိသလို၊ ကျမရဲ့ သူငယ်ချင်းတော်တော်များများကလည်း ကျမရဲ့ဘလော့ကို မသိကြပါဘူး။
ပြောရင်းပြောရင်းနဲ့ စကားများသူတို့ ထုံးစံအတိုင်း နိဒါန်းပျိုးနေတာ နည်းနည်း ရှည်သွားပါပြီ။ တကယ်ရေးမဲ့အကြောင်းကိုပဲ ရေးပါတော့မယ်။ ကျမရဲ့ ဘလော့အကြောင်းနဲ့ ဘလော့မိတ်ဆွေတွေအကြောင်းကို။
ဒီဘလော့ကို စဖွင့်တော့ ကျမ BaganNet မှာ အလုပ်လုပ်နေတုန်းပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ကျမရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်က ဘလော့ရေးပါလားလား။ blogspot account ဖွင့်ပါလားလို့ အကြံပေးတာကတစ်ကြောင်း၊ ပြီးတော့ MZ မှာလည်း လူတွေ သူတို့ဘလော့တွေအကြောင်းပြောတာကြောင့်ပါ (၂၀၀၉ )ခုနှစ်၊ မတ်လ(၉ )ရက်နေ့မှာ စဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။
စဖွင့်ခါစက ရေးဖော်ရေးဖက်ကတော့ အထက်တန်းကျောင်းကတည်းက ခင်ခဲ့ရတဲ့၊ ကွန်ပျူတက္ကသိုလ်မှာလည်း တောက်လျှောက် ကျောင်းအတူတက်ခဲ့တဲ့ ကျမရဲ့ ချစ်သူငယ်ချင်း Leo Zin ပါ။ သူက အရင်ဆုံး Dream Girl ဆိုပြီး အကောင့်တစ်ခုနဲ့ စာရေးပါတယ်။ နောက်တော့ အဲ့အကောင့်ကိုပိတ်ပြီး Leo Zinဆိုတဲ့ အကောင့်အသစ်နဲ့ စာရေးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ပုဒ်စ၊ နှစ်ပုဒ်စရေးပြီး အလုပ်တွေများလို့ဆိုကာ ဆက်မရေးတော့ပါဘူး။ ပြန်ရေးပါလားလို့ တိုက်တွန်းတော့ သူ.. အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်သွားရင် ရေးမယ်ပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူက အိမ်ထောင်ကတစ်ဖက်၊ stress များပြီး အလုပ်တအားများတဲ့ သူ့အလုပ်ကတစ်ဖက်၊ ACCAစာမေးပွဲတွေကတစ်ဖက်၊ ဘာသာရေးလုပ်ငန်းတွေကတစ်ဖက်မို့ ပြန်ရေးဖြစ်ပါ့မလားလို့ တွေးမိပါတယ်။ ( သူက စာမရေးတော့ပေမဲ့ ကိုယ့်စာတွေ လာဖတ်ပုံရပါတယ်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပို့(စ်)တွေရေးပြီးရင် ကိုယ့်ကို ဟိုမေးဒီစစ်လုပ်တတ်လို့ သူ့ကို နည်းနည်းတော့ လန့်ရပါတယ်။ :P)
နောက်ထက် ခင်မင်ရတဲ့ ရေးဖော်ရေးဖက်ကတော့ လူပျိုကြီး Libra Tun ပါ။ သူကတော့ အဲ့ဒီဘလော့အပြင် အင်္ဂလိပ်စာအတွက် ဘလော့တစ်ခု၊ photography အတွက် ဘလော့တစ်ခု၊ နည်းပညာအတွက် ဘလော့တစ်ခု ဖွင့်ထားပါတယ်။ ကိုယ်ကတော့ အဲ့ဒီ Libra Tun account တစ်ခုကိုပဲ ဖတ်ပါတယ်။ အမြဲပြုံးနေပြီး လူတိုင်းကို ကူညီတတ်တဲ့၊ တစ်ခါတစ်ရံ အူကြောင်ကြောင်တွေလုပ်တတ်တဲ့ အဲ့ဒီ တူထွန်း (Libra = တူ)ကိုတော့ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်နောက်ဆုံးနှစ်မှာ ပရောဂျက်အတူတူလုပ်ရင်း ခင်ခဲ့တာပါ။ ကျမ စလုံးကို ရောက်လာပြီး Home sick ကြောင့်ရော၊ ရည်းစားနဲ့ပြတ်ပြီး အသည်းကွဲတာရော၊ ရေပြောင်းမြေပြောင်းအဆင်မပြေတာတွေကြောင့်ပါ တငိုငိုတရီရီ လုပ်နေတဲ့ ကျမကို စာပြန်ရေးဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းပါပဲ။ ( အဲ့တုန်းကတော့ သူတိုက်တွန်းပေမဲ့ ကိုယ်က စာပြန်မရေးဘဲ Farmvillieတွေ၊ Cityvillieတွေဘက်ကို လှည့်သွားခဲ့ပါတယ်။ :D )
အပြင်မှာရော၊ ဘလော့မှာပါသိတဲ့ နောက်ထပ် ဘလော့မိတ်ဆွေကတော့ သဘောကောင်းပြီး၊ ပွင့်လင်းတဲ့ Choco Thazin ပါ။ သူလည်း ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ကပါပဲ။ ကျောင်းမှာတုန်းကတော့ မျက်မှန်းတန်းမိရုံသာရှိခဲ့ပေမဲ့ ဘလော့ပေါ်၊ မျက်နှာစာအုပ်ပေါ်မှာ သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ သူ့ကို တော်တော်လေးကို ခင်မိသွားပါတယ်။ ဘလော့စရေးခါစကဆို ရေးသမျှပို့(စ်)တွေမှာ အားဆေးတွေတို်က်ကျွေးတတ်ပြီး လက်တွဲခေါ်ခဲ့တဲ့၊ ကိုယ်စာမရေးတော့လို့ စာပြန်ရေးဖို့ အမြဲ တိုက်တွန်းခဲ့တဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ သူလည်း စာမရေးတာ တော်တော်ကြာပြီ။ မျက်နှာစာအုပ်မှာလည်း ပေါ်လိုက်၊ ပျောက်လိုက်နဲ့။ မအားဘူးနဲ့တူပါတယ်။
လူချင်းမသိပေမဲ့ ဘလော့ပေါ်မှာ သိမိတဲ့သူကတော့ မျှဝေမှုတို့ စုစည်းရာ ဘလော့ကိုရေးတဲ့ ကိုအင်္ဂါဟူးပါ။ သူ့ကြောင့်ပဲ ကျမရဲ့ဘလော့လေး All Myanmar Blogger စာရင်းထဲမှာ ပါသွားတာပါ။ သူရေးတဲ့၊ ဝေမျှတဲ့စာတွေကို သဘောကျလို့ သူ့ဆီမှာ ကွန့်မက်တွေ ချန်တတ်ပါတယ်။ သူ့ဘလော့က လူသိပ်မသိပါဘူး။ သူကတော့ စာစရေးကတည်းက အရေးကျဲ၊ အတင်ကျဲပြီး သူ့ဘလော့လေးငြိမ်သက်နေတာလည်း တစ်နှစ်ခွဲ၊ နှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီ ထင်ပါတယ်။ ဘလော့လေးကို စွန့်ခွာလိုက်ပြီ ထင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ယောက်ကတော့ မိုးခါးပါပဲ။ ကိုယ်.. စာရေးခါစတုန်းက ကိုယ့်ဆီ မကြာခဏ အလည်လာတတ်သူပါ။ အခုတော့ သူလည်း စာမရေးတော့ပါ။ ဥပုသ်နေ့တော့ ဘလော့ကနေ အပတ်စဉ် နှိုးဆော်ပေးပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ။ မဟုတ်ရင် ကိုယ်လည်း သိမှာမဟုတ်။
ကျမ မှတ်မိသလောက်တော့ ကျမကိုယ်တုိုင်လည်း (၂၀၁၀) မေလလောက်အထိပဲ စာရေးခဲ့ပြီး အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း ဘလော့နဲ့ ဝေးသွားပါတယ်။ စာတွေလည်း လိုက်.. မဖတ်ဖြစ်တော့ပါဘူး။ လေး၊
ငါးလနေလောက်မှာ တစ်ပုဒ်လောက် ထရေးရင်လည်း ရေးပါတယ်။ (၂၀၁၂) နှစ်ဆန်းပိုင်းလောက်မှာမှ ဘလော့တွေ၊ စာတွေပြန်ဖတ်ဖြစ်ပြီး (၂၀၁၂) စက်တင်ဘာလောက်ရောက်မှသာ စာပြန်ရေးဖြစ်တာပါ။
စာပြန်ရေးဖြစ်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ ခင်ဖို့ကောင်းတဲ့ အမ မစပယ်ချို၊ ကွန့်မက်တွေအမြဲချန်တတ်တဲ့ ညီမလေးမိုးနတ် ( သူပျောက်နေတာကြာပြီ။) တို့နဲ့ ခင်ခဲ့ပါတယ်။ လူတွေနဲ့ လိုက်လျောညီထွေမှုရှိပြီး သဘောကောင်းတဲ့၊ ဘလော့မှာ အားဆေးလေးတွေချန်တတ်တဲ့ မစံပယ်ချိုရဲ့ဘလော့နဲ့အတူ သူ့ရဲ့ အမျိုးသား ကိုလွင်ပြင်ရဲ့ ဘလော့ကို သိပြီး ကဗျာတွေ၊ စာတွေ ဖတ်ခဲ့ရပါတယ်။ ( မဂျက်(စ်)ကြောင့် ကဗျာတွေ လိုက်ဖတ်တတ်တဲ့ အကျင့် ရသွားတာပါ)။
အဲ့ဒီနောက်တော့ လင့်(ခ်)ရပြီး စာလာဖတ်တဲ့ ဆရာ ကိုငြိမ်းစိုးဦးနဲ့ ဆရာ ကိုကြည်နိုင်တို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဘလော့တွေမှာ စာဖတ်ခွင့် ရခဲ့ပါတယ် (သူတို့တွေရေးတဲ့ အတွေးကောင်း၊ အရေးဆန်းတဲ့စာတွေကိုတော့ တခြားနေရာတွေမှာ ဖတ်ဖူးပါတယ်။ ကိုယ့်ဘလော့ကို အလည်လာကြတော့ အံ့သြဝမ်းသာမိပါတယ်)။
နောက်... စာလိုက်ဖတ်ရင်း စာရေးကောင်းလို့ သဘောကျမိတဲ့၊ ကိုယ်ချန်ခဲ့တဲ့ ကွန့်မက်တစ်ခု၊နှစ်ခုကနေ ကိုယ့်ဘလော့ကို လိုက်လာပြီး စာလာဖတ်တတ်တဲ့ တက်သစ်စစာရေးဆရာ ကိုဝေမိုးနိုင်နဲ့ ဘလော့ဂါ မမြတ်ပန်းနွယ်တို့လည်း ရှိပါသေးတယ်။ ကျမရဲ့ ပထမဦးဆုံး one and only short story လေးကို သေသေချာချာဖတ်ပြီး အပြုသဘောနဲ့ ဝေဖန်ထောက်ပြပေးတဲ့ ကိုဝေမိုးနိုင်ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောင်လည်း ဝတ္ထုတိုလေးတွေရေးဖြစ်ခဲ့ရင် ထောက်ပြ၊ သင်ပြပေးပါဦးလို့။း)
နောက်ဆုံး ကျန်နေသေးတဲ့ ဘလော့မိတ်ဆွေလေးကတော့ ဘလော့ပေါ်မှာရော၊ အပြင်မှာပါသိတဲ့ နွေဦးမိုး ဘလော့ကိုရေးတဲ့ ဘလော့ဂါ ကြည်ဖြူပိုင်ပါပဲ။ သူက .. ကိုယ့်လို မဟုတ်ဘူး။ စာရေးကောင်းတယ်။ သူ့ကိုတော့ NTU cultural night မှာ အတူတူကတုန်းက သိခဲ့တာပါ။ သဘောကောင်းပြီး ကူညီတတ်တဲ့၊ ဟင်းချက်ကောင်းတဲ့ အဲ့ဒီ သူငယ်ချင်းမလေးက အတူတူကကြတုန်းက ကျမကို သူ့ဘလော့လိပ်စာလေး ပေးပါတယ်။ ကိုယ်က ခပ်တည်တည်နဲ့ယုထားပြီး သူ့ဘလော့မှာ စာတွေသွားဖတ်၊ ကွန့်မက်တွေချန်ခဲ့ပါတယ်။ သူက ကိုယ်မှန်းမသိဘဲ ကိုယ့်စာတွေပြန်လာဖတ်ပြီး ကွန့်မက်တွေ ချန်သွားပါတယ်။ ကိုယ့်မှာ ရီလိုက်ရတာ။ တော်တော်ကြာမှ သူ့ကို ကိုယ်မှန်းသိအောင် ပြောလိုက်ရပါတယ်။ :P
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ ကျမရဲ့ ဘလော့မိတ်ဆွေတွေ ကုန်ပြီထင်ပါတယ်။ အများကြီးတော့ မရှိပါဘူး။ ရှိရင်လည်း ဒီလိုပို့(စ်)ရေးနိုင်မယ် မထင်။ တကယ်လို့ တစ်ယောက်စ၊ နှစ်ယောက်စ ကျန်ခဲ့ရင်လည်း ခွင့်လွှတ်ကြပါလို့။
အားလုံးပဲ Happy Belated Blog Day ပါ။ ဘလော့မိတ်ဆွေတွေအပြင် ကျမရေးတဲ့စာတွေကို အမြဲ ပုံမှန် လာဖတ်ကြတဲ့ ကျမနဲ့သိသူ၊ မသိသူတွေအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
စကားချပ်။ ။ ဒီပို့(စ်)ကလေးဟာ ကျမစာရေးတဲ့သက်တမ်းတစ်လျှောက် ပထမဆုံးရေးတဲ့ tagged post လေးပါ။ နောက်ကျမှရေးပေးပေမဲ့ နောက်ကျတာက လုံးဝမရေးတာမဟုတ်တာမို့ မဂျက်(စ်)ကျေနပ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ :P
14/09/2013; 6:20PM; GMT+8
Posted by witch83 at 6:20 PM5comments:
Labels: My Diary, Tagged Post, အမှတ်တရ
Posted by witch83 at 5:19 PM No comments: